I-BlueStacks: Izicelo ze-Android ku-Windows | Kusuka kuLinux
Kudala ngisebenzisa i- Izinhlelo ze-Android, kuyinto elula engokoqobo ngiyabonga BlueStacks. Lolu hlelo lusivumela ngokushesha futhi kalula ukubuka zonke izinhlelo zokusebenza ze Android ku-a ikhompyutha unikezwe i- Uhlelo lokusebenza lwe-Windows.
Nge-interface elula Izinhlelo ze-Android, uzoba nazo zonke izinhlelo zokusebenza ze- umakhalekhukhwini ngokunethezeka kwedeskithophu noma i-laptop.
Okwamanje amasistimu wesikhathi anjengeVirtualBox noma ukufana asele ngemuva ukwenza indlela BlueStacks. Kumele kuqashelwe ukuthi yebo, izoba nazo zonke izicelo ngaphandle kwesigaba socingo, esisebenza kuphela ocingweni oluhambayo noma lwasendlini.
Ungahle ube nentshisekelo kufayela le- Uhlelo Lokusebenza lwe-2.1 lwe-Android okuwuhlelo olukhethekile lwe i-GPS ye-android .
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » I-BlueStacks: Izinhlelo ze-Android ku-Windows